Xubnaha baarlamaanka cusub ee Somalia oo lagu dhawaaqi doono laba maalmood kadib, – Radio Daljir
Agoosto 6, 2012 3:29 b 0
Moqdisho, Aug. 05- Odayasha dhaqanka ee ku shirsan magaalada Muqdisho ayaa maanta bilaabay gudbinta liis-ka xubnaha kamid noqonaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya yeelanayso.
Shir maanta odayaasha iyo guddiga farsamada ee xulista baarlamaanku Muqdisho ku yeesheen ayaa looga hadlay sidii ugu danbayn 7-da bishaan loo dhamaystiri lahaa guud ahaan xubnaha baarlamaanka Soamaaliya oo ka kooban 275 xubnood, kuwaasoo in ka badan 70 kamid ah ay noqon doonaan haween.
Suldaan Muuse Cali Maxamed oo kamid yahay issimada ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasoo xilligan laga sugayo soo xulista baarlamaan cusub ayaa Radio Daljir u sheegay in maanta (Axad) la gudbiyey inta badan xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya yeelan doonto.
Suldaan Muuse Cali Maxamed oo Radio Daljir weydiisey in issimadu u madax banaan yihiin soo xulista baarlamaanka ayaa sheegay inay jirto faragelin odayaasha uga imaanaysa dhinaca dawlada iyo xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan arimaha Somalia.
Warar la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in qaar kamid ah odayaasha dhaqanku doonayaan inay kusoo daraan liiska xildhibaanada cusub qabqablayaashii dagaalka, Suldaan Muuse oo Daljir weydiisey waxa uu ka qabo eedayntaas issimada loojeedinayo ayaa qiray in qaar kamid ah isimada uu kujiro damaca soo xulista qabqablayaal dagaal iyo dad aan buuxin shuruudaha laga rabo baarlamaanka cusub. Waxaana uu sheegay in taasi sahashey in odayaasha lala soo fara geliyo arrimaha xulista baarlamaanka cusub.
Odayaasha dhaqanka oo muddo 3 bilood ah ku sugnaa Muqdisho ayaa halkaasi loo geeyey soo xulista baarlamaan cusub oo bedela baarlamaankii hore, iyo xulista ergadii ansixin-lahayd Dastuurka.
Baarlamaanka cusub ee xiligan loo fadhiyo in lasoo xulo waxaa horyaala shuruudo badan, xubnaha baarlamaankan ka mid noqondoona ayaa la hordhigay jaranjarooyin badan oo aan fursad siinayn inay baarlamaan noqdaan dad aan u qalmin.